कहिले सपनामा आफ्नो बिहे भएको देख्नु भएको छ ? यस्तो हुन्छ यसको फल जानिराखौ ..! —
कहिले सपनामा आफ्नो बिहे भएको देख्नु भएको छ ? यस्तो हुन्छ यसको फल जानिराखौ ..!
मानिसको दैनिक जीवनमा दिन मा एक पटक सुत्ने पर्ने बाध्यता हुन्छ भगवान ले नै हामीलाई यस्तो फल दिएर पठाएका छन् ! सुत्दा दिउस होस् या राति हामि सबैले सपना देख्ने गर्छौ सपना मा अनेक कुरा हरु देखिन्छ हामीले सोच्दै नसोचेका कुराहरु हामीले सपना मा देख्न सक्छौ ! तर कहिले काही त यस्तो सपना पनि देखिन्छ आफ्नै बिहे भएको सपना देखिन्छ कुनै पनि सपना ले केहि नै केहि संकेत गरेको हुन्छ्ब ! यस्तो सपना देख्दा के हुन्छ हानि हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ भन्ने बारेमा बताएका छौ !
सपनाका विषयमा केही भ्रम र केही यथार्थ हुन्छ भन्ने मान्यतामा मानिसहरु हुन्छन् । कसैको सपनाको फल तत्काल मिल्छ भन्ने भ्रम पनि पालेका हुन्छन् । यति हुँदा पनि कस्तो सपना देख्दा के फल मिल्छ भन्ने विषय सवैलाई जानकारी नहुन सक्छ ।सपना देख्नु स्वभाविक हो, कति राम्रा देखिन्छन् कति नराम्रा सबै सपना पूरा हुन्छन् भन्ने पनि छैन । अधिकांशका धेरै सपना अधुरा नै रहन्छन् । हामीले देख्ने सपना कहीँ न कहीँ बिपनासँग पनि जोडिएको हुन्छ।
कति सपना निदाउँदा देखिन्छ भने कति सपनाले निदाउँनै दिँदैन । हामीले देख्ने सपनाको दैनिक जीवनमा शुभ अशुभ संकेत गर्छ भन्ने जनविश्वास छ ।ज्योतिष शास्त्रअनुसार सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्दा के कस्तो फल मिल्छ भन्ने बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । यदि कोही व्यक्ति सपनामा विवाह वा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुनै वस्तु देख्दछ भने त्यसको शुभ र अशुभ दुबै अर्थ हुन्छ ।
सपनामा आफ्नै विवाह भएको देख्नुभयो अथवा साथी, नातेदार कसैको विवाह भएको देख्नु भयो भने यस्तो सपनाको शुभ संकेत मानिदैन । यस्तो सपना देख्दा तपाईँको काममा कुनै बाधा आउनसक्ने संकेत दिन्छ।यदि तपाईँले कोही महिलाको विवाह हुँदै गरेको देख्नुभयो भने यो तपाईँको लागि शुभ संकेत हुने विश्वास गरिन्छ । यस्तो सपना देखे तपाईँको जीवनमा छिट्टै खुशी आउनेवाला छ भनेर बुझिन्छ। तर बेहुली रुँदै गरेको देख्नुभयो भने त्यसलाई अशुभ मानिन्छ।
अस्ट्रेलियामा भएको कार दु’र्घ’टनाका चालक सागर भट्टराईलाई थु’नामा राख्न अ’दालतले दियो आ’देश
जुम्ल्याहा दिदी बहिनी प्रिज्मा र प्रिन्सिको अभिनयमा ‘रनभुल’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)